शक्तिशाली चमत्कारहरूका लागि प्रार्थनाहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स दैनिक चमत्कारहरूका लागि शक्तिशाली प्रार्थनाहरू
दैनिक चमत्कारहरूका लागि शक्तिशाली प्रार्थनाहरू
आज हामी दैनिक चमत्कारहरूको लागि शक्तिशाली प्रार्थनाको साथ व्यवहार गर्ने छौं। कसले चमत्कार चाहँदैन? चमत्कार एक घटना हो जुन घट्ना घट्छ जब हामीले कमसेकम आशा गर्थ्यौं। के तपाइँ कहिल्यै त्यस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ जहाँ सबै तपाईको बिरूद्धमा काम गरिरहेको देखिन्छ? केवल जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि चीजहरू अझ राम्रो हुन सक्दैन, मद्दत आयो जहाँबाट तपाईले कम आशा गर्नुभयो।
सारपतकी विधवा र अगमवक्ता एलियाबीचको मुठभेड चमत्कारको कम कुरा हो। ती गरीब विधवा र उनको छोरोले अन्तिम खानेकुरा खाइरहेका थिए जब अगमवक्ता उनीहरूको घरमा आए। एलियाले विधवालाई पहिला खाना तयार पार्न बिन्ती गरे। एउटा कुरा हामीले चमत्कारहरूको बारेमा बुझ्नुपर्दछ आज्ञाकारिता। जब हामी दैनिक चमत्कारको लागि व्यग्र प्रार्थना गर्दछौं, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले दिइएका निर्देशनहरू कसरी पालन गर्ने सिक्नुपर्छ। सारपतकी विधवाले एलियाको कुरा मानेनन् भने उनी यति धेरै आशिष पाउने थिइनन्। उनले एलियाको भोजन तयार गरिन्, र उनले सोचे कि यो उनको लागि समाप्त भएको थियो, प्रभुले उनलाई प्रशस्त आशिष् दिनुभयो।
हामीमध्ये केही यस्ता छौं जुन हामीले हाम्रो जीवनमा एक वा दुई पटक मात्र चमत्कार अनुभव गरेका छौं। परमेश्वर सधैं हाम्रो जीवनमा हरेक दिन आफ्ना आश्चर्यकर्महरू प्रदर्शन गर्न सेट हुनुहुन्छ। दैनिक चमत्कार त्यस्तो हो कि तपाई कामहरू गर्न संघर्ष गर्दैनन्; तपाईं उत्कृष्ट उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न कष्ट दिनुहुन्न। जहाँ अरु अस्वीकृत भए पनि तपाईलाई त्यहाँ मनाईनेछ। त्यो चमत्कार हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हामी नयाँ वर्ष प्रवेश गर्छौं, हामीलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबै चमत्कारहरूको आवश्यक पर्दछ।
कोभिड १ The उपन्यास हाल विश्वका सबै देशहरूमा बढ्दै छ। धेरै देशहरूले पहिले नै दोस्रो लकडाउन जाने सोचेका छन् किनकि उनीहरूले भाइरसको दोस्रो लहर यसको पहिलो भन्दा बढी हिट हुने आशा गरेका छन्। २०२१ मा आरामदायी जीवन बिताउन हामीलाई परमेश्वरको चमत्कारको आवश्यकता छ। म स्वर्गको अधिकारबाट फरमान्छु; भगवानले तपाईंको आवश्यकतालाई सधैं येशूको नाममा पुर्‍याउनुहुनेछ। तपाईको जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईलाई एउटा चमत्कारको आवश्यक पर्दछ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्तिले तपाईंलाई येशूको नाममा अचम्मित तुल्याउन सक्छ।
प्रभु येशू, म तपाईंलाई जीवनको वरदानको लागि धन्यवाद दिन्छु, तपाईंले मलाई बनाउनुभएको अर्को सुन्दर दिन हेर्नको लागि तपाईंले मलाई दिनुभएको अनुग्रहको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
पिता प्रभु, वरिपरि सबै दुष्टता, भाइरसको प्रकोपको साथ, आर्थिक मन्दी, पिता, म तपाईको अनुग्रहले येशूको नाममा मलाई सम्हाल्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु।
हे प्रभु, मेरो जीवन सबै प्रकारले चमत्कारको योग्य छ, पिता, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूका नाममा गर्नुभएको आश्चर्यकर्महरू गर्दछु। जहाँ म अस्वीकार गरिएको छु, प्रभु कृपा मनाउनलाई, यो येशूको नाममा ममाथि परोस्।
प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईं स्वर्गबाट ​​कृपाले तल हेर्नुहुनेछ, र तपाईंले येशूका नाममा मेरो सबै रोगहरू निको पार्नुहुनेछ। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको शक्ति र अनुग्रहले मेरो जीवनको प्रत्येक क्षेत्रलाई छोयो जुन येशूको नाममा छुनु आवश्यक छ।
हे प्रभु येशू, तपाईंले हाम्रा सबै दुर्बलताहरूलाई क्रूसमा बोक्नुभयो। म तपाईं येशू को नाम मा मेरो सबै दुर्बलता निको पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, हरेक प्रकारको रोग र बिमारी येशूको नाममा हटाइएको छ।
प्रभु येशू, म ईश्वरीय कामको लागि प्रार्थना गर्दछु। धर्मशास्त्रले भन्यो कि मेरा परमेश्वर ख्रीष्ट येशू मार्फत महिमाका सबै सम्पत्तिहरू अनुसार मेरो सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ। म मेरो रोजगारीको पत्र येशूको नाममा प्रकट हुन्छु। मलाई अस्वीकार गरिएको हरेक संगठनमा, उत्कृष्टताको लागि मलाई घोषणा गर्ने अनुग्रह यो येशूको नाममा ममाथि आयो।
प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि मलाई मेरो जीवनको लागि निर्देशन र मार्गनिर्देशन चाहिएको प्रत्येक तरिकामा, म तपाईंलाई येशूकै नाममा मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। म मेरो मानव ज्ञानको आधारमा आफ्नो जीवन चलाउन इन्कार गर्छु; म मेरो जीवन परीक्षण र त्रुटिको आधारमा चलाउन अस्वीकार गर्दछु; म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको आत्माले मलाई सिकाउने र मलाई पोषण गर्ने, यो येशूको नाममा ममाथि आऊ।
प्रभु येशू, धर्मशास्त्र भन्छ जब इस्राएल मिश्रबाट बाहिर जाँदा, याकूबको घर अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूले; यहूदा इस्राएलको पवित्रस्थान थियो। समुद्रले यो देख्यो र भाग्यो: जोर्डन फिर्ता त्यहाँ थियो। पर्वतहरू भेडाहरू जस्तै, र साना पहाडहरू भेडाहरू जस्तै छन्। म सर्वोच्चको शक्तिले डिक्री गर्छु, मेरो बाटोमा हुने प्रत्येक समस्या येशूको नाममा भाग्नुपर्दछ। पवित्र आत्माको आगोले मेरो विरुद्धमा खडा सबै अवरोध नष्ट गर्दछ।
प्रभु, म वैवाहिक सफलताको लागि प्रार्थना गर्दछु। मेरा बच्चाहरू येशूको नाममा धन्य हुन्। म आफ्नो विवाहको बारेमा चमत्कारको लागि परमेश्वरलाई खोज्ने सबै तरिकामा डिक्री गर्छु; ईश्वरको नाममा अहिले नै येशू बस्नुहुन्छ।
प्रभु येशू, हरेक तरिकामा म तपाईंलाई आशीर्वादको लागि खोज्दै छु, पिता, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूको नाममा प्रशस्त गरी मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म आशिष्को खुला स्वर्ग को लागी फरमान गर्दछु। म आदेश दिन्छु कि तपाईंको आशिष ममा येशूको नाममा पर्दछन्।
हे प्रभु, मेरो जीवनलाई तपाईंको अनुग्रह चाहिन्छ हरेक कुरामा, प्रभुले मलाई येशूको नाममा अनुग्रह गर्नुहुन्छ। जब म पूर्वतिर जान्छु, कृपया मलाई खुशी पार्नुहोस्। जब म पश्चिम तर्फ जान्छु, तपाईको आशीर्वाद मलाई पछ्याउँनुहोस् जब म उत्तरतर्फ जान्छु, तपाईंको नाम येशूको साथमा रहोस्।
धर्मशास्त्रमा यो लेखिएको छः “जसलाई म कृपा दर्शाउनु चाहन्छु उसैलाई कृपा दर्शाउँछु। हे प्रभु, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि मलाई कृपा देखाउनेहरू मध्येका एकजनाले येशूको नाउँमा मलाई योग्य मान्नुभयो।
प्रभु येशू, मेरो जीवनलाई तपाईको आश्चर्यकर्मको जहिले पनि आवश्यक छ, मेरो स्वास्थ्य, विवाह, क्यारियर, वा शिक्षाको बारेमा, हे प्रभु, म तपाईलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूका नाममा गर्नुभएको आश्चर्यकामहरू गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईं आश्चर्यजनक काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु कि एघारौं घण्टाको चमत्कार मेरो जीवनमा आज येशूको नाममा होस्।
हे प्रभु येशू, मेरो जीवनको प्रत्येक दिन, येशूको नाममा तपाईंको हात ममाथि रहोस्।
शक्तिशाली चमत्कार प्रार्थना चमत्कार
चमत्कारको लागि प्रार्थना
अघिल्लो लेखमा२०२१ का लागि शक्तिशाली घोषणा
अर्को लेखमा२०२१ मा व्यापार सफलताको लागि प्रार्थना
इमानुएल डिक्सन डिसेम्बर २,, २०१ At ११::29। अपराह्न
यी प्रार्थना पोइन्टहरूको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु।
Sottie इवान्स जनवरी १०, २०२० बिहान :5: 2021
अद्भुत प्रार्थना पोइन्टहरू
Okpala आशा जनवरी १०, २०२० बिहान :9: 2021
यस प्रार्थना पोइन्टको लागि धेरै धेरै धन्यबाद
अनानास जनवरी १०, २०२० बिहान :12: 2021
आमेन Jesus येशूको नाममा हामी दावी गर्छौं र डिक्री गर्छौं र प्रशंसा गर्छौं र बुबाले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ येशूमा दिनुहुन्छ सबैभन्दा शक्तिशाली र बहुमूल्य नाम हामी स्वीकार्छौं र यसलाई प्राप्त गर्दछौं आमेन हलेलुह आमेन प्रभुको प्रशंसा गर्छौं।
फुकाह गिब्सन जनवरी १०, २०२० बिहान :13: 2021
धन्यबाद यी अद्भुत प्रार्थना पोइन्ट्स को लागी धन्यवाद कि भगवानले तपाईको सर बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ
बोबी मैथ्यू फेब्रुअरी २,, २०२० बिहान २:१:1 बिहान